Ururka Xisbulah oo sheegay in uu diyaar u yahay dagaal uu la g... | Universal Somali TV
Ururka Xisbulah oo sheegay in uu diyaar u yahay dagaal uu la galo Israel
Ururka Xisbulah ee dalka Lubnaan ayaa waxay sheegeen in dowlada Israel aysan diyaar u aheyn dagaal ay la gasho ciidamadooda xilli Israel bilihii la soo dhaafay ay kordhisay dhaqdhaqaadee milatari ee bariga dhexe.
Mas,uuliyiinta Ururkaan oo ka hadlay dhul balaarsiga ay milatariga wadeen Tal aviv ka wadaan dhulka reer Falastiin ayaa sheegay in aysan marnaba milatariga yahuuda aysan ku dhicin in ay soo haweystaan Lubnaan.
Ku xigeenka xoghayaha guud ee ururkan Sheikh Naim Qassem oo wareysi siinayay wargeyska afka carabiga wax ku qora ee Elnashra ayaa intaa ku daray in siyaasiyiinta Israel aysan u ogoleyn ciidankooda ay dagaal la galaan dowlada Lubnaan.
Dhanka kale wadaadkan ayaa bogaadiyay hormarada dhanka milatariga ah oo ay sameyeen milatariga Lubnaan.
Qassem ayaa sidoo kale sheegay in ay diyaar u yihiin waqtigaan dagaal kasta oo kaga yimaada Milatariga Israel Jawaabna ay ka bixin doonaan.
Sanadii 2006-dii ayey aheyd markii labada dhinac uu dhexmaray dagaal qaraar kaasi oo ay ku dhinteen ciidamada ka tirsan labada dhinac,waxaana ururka Xisbulah uu sheegay in cashar adag ay ku bareen milatariga Israel.
Kan-xigaHey,adaha gargaarka oo walaac ka muuj...
Kan-horeLaba nin oo lagu eedeyay dilka jaajuu...
46,652,214 unique visits